नर्सको बढ्दो पलायनले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव » Khulla Sanchar
नर्सको बढ्दो पलायनले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव
नर्सिङ यस्तो पेशा हो, जसले व्यक्ति, परिवार र पूरा समुदायको स्वास्थ्य अनुकुल राख्न सघाउँछ । विश्वमा नर्सिङलाई सम्मानजनक पेशाका रुपमा लिइन्छ । हिजोका दिनसम्म अस्पतालमा मात्र सिमित नर्स अहिले हरेक क्षेत्रका लागि अपरिहार्य बन्दै गइरहेका छन् । विदेशमा नर्सहरुको माग बढ्दो छ तर हाम्रो देशमा भने नर्सहरु उत्पादन अनुसारको खपत हुन सकिरहेको देखिदैन ।
बर्षेनी नर्सहरुको उत्पादनमा बढिरहेको छ । नर्सिङमा पनि अरु पेशा जस्तै विभिन्न स्तरको पठनपाठन हुन्छ । प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पि.सि.एल), स्नातक तह (बि.एन.एस र बि.एस्सी) स्नातकोत्तर( एम.एन र एम.एस्सी) नर्सिङ भनेर विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा अध्यापन भइरहेको छ । तर, नेपालका अस्पतालमा रोजगारी भने स्टाफ नर्सका लागि मात्र छ । त्यहाँ पनि अनुभव छैन भने स्वयम्सेवी भएर काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ । जसमा केही महिनापछि मात्र तलब पाइन्छ ।
नेपालमा नर्सिङमा आगामी अध्ययन गरेर पनि सोही अनुसारको रोगजारी मूल्यांकन र सुविधा पाउन एकदमै समस्या छ अस्पतालमा रोजगारीका लागि स्टाफ नर्स मागेको हुन्छ, सोही पोष्टमा आवेदन दिनेहरु पि.सि.एल, बि.एस्सी, बि.एन तथा एम.एन सबै हुन्छन् । त्यो उनीहरुको बाध्यता पनि हो । आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाएपछि त्यो एउटा विकल्प हुन पुग्छ । सरकारी अस्पतालमा पनि स्टाफ नर्सको माग धेरै छ, अहिले स्थितिमा स्नातक तहका लागि केही माग भएपनि उत्पादन अनुसारको खपत छैन ।
मैले पि.सि.एल सकेर केही वर्ष काम गरें । त्यसपछि बि.एन.एस पढ्न आउँदा राजिनामा दिएर आउनुपर्यो । राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यता नै थियो किनकी निजी अस्पतालले अध्ययन बिदाको सुविधा दिदैनन् । अहिले म बि.एन.एस तेस्रो (अन्तिम वर्ष)को विद्यार्थी हुँ । मेरो अध्ययन सकिन केही महिना मात्र बाँकी छ । म लगायत मेरो साथीहरुलाई रोजगारीको चिन्ता हुन थालेको छ । अध्ययन सकेपछि आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउने समस्याले हामीलाई निराश बनाएको छ । योग्यताको मूल्यांकन, रोजगारी र सुविधा पाउन हामी कहाँ जाने ? के गर्ने ? अन्योलमा छांै । हामी जस्ता नर्सहरु देशभरी धेरै छन् जो यस्तै अन्योलमा छन् ।
नर्सिङ पेशामा रोजगारका लागि विदेशिने क्रम बढ्दो छ । नहोस् पनि किन ? देशमा जति अध्ययन गरेपनि योग्यताको मूल्यांकन छैन । देशमा योग्यताको कदर नहुने हो भने, रोजगारी र सेवा सुविधा प्राप्त नहुने भने अहिले भएका र पढेका नर्सहरु विदेशिदै जानेछन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने नर्सिङ पढ्न पनि कोही खोज्ने छैनन्, अन्ततः यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
– मुना आचार्य, नर्स